Loko maro sy bateria lehibe kokoa ho an'ny Apple Watch Series 7 | Avy amin'ny mac aho
Loko maro sy bateria lehibe kokoa ho an'ny Apple Watch Series 7
Ny tsaho momba ny vaovao azon'ny maodely Apple Watch Series 7 vaovao dia manondro fa mety hanana bateria lehibe kokoa izy ary koa loko hafa azo isafidianana. Momba ny bateria dia misy firesahana ny amin'ny mety hisian'izany Apple dia mampihena ny haben'ny singa anatiny ary avy eo mahatratra amin'ny fomba voajanahary tanteraka hanampiana bateria lehibe kokoa. Ity bateria ity dia antenaina hahatratra ny fahaleovan-tena lehibe kokoa noho ny atolotry ny maodely Apple Watch Series 6 ankehitriny, saingy io fampitomboana ny bateria io dia tsy voalaza mazava tsara, na izay ho tratrarina.
Azo atao koa ny manisy loko vaovao amin'ity Apple Watch vaovao ity ary na dia manana karazana karazany ampy aza isika anio dia antenaina fa afaka manampy loko hafa izy ireo. Amin'ity tranga ity avy amin'ny tranonkala iMore tsy lazain'izy ireo amintsika mazava izay loko mety misy amin'ity andiany 7 vaovao ity nefa voalaza fa afaka manampy iray vaovao izy ireo ho fanampin'izay hita amin'ireo maodely ankehitriny, ny mena sy ny manga. Izany dia toy ny zava-drehetra ary izany dia ho an'ny tsiro, ny loko.
Teboka iray hafa izay toa mazava fa ny orinasa Cupertino dia handefa ity Apple Watch vaovao ity miaraka amin'ireo maodely iPhone vaovao, angamba aorian'ny fahavaratra tsy misy daty marina. Ho fanampin'izay, voalaza fa andiany faha-7 amin'ny fotokevitra izy io, tsy hanova ny endrik'ilay boaty izy io, ary tsy ho lehibe kokoa, ary tsy ho efamira eo anilany fa ny tsaho sasany dia nanamarika herinandro vitsivitsy lasa izay. Ny antenaina dia ny fivarotana an'ity Apple Watch ity sy ny modely sisa tavela Apple Watch avy amin'ny orinasa Cupertino, mpitarika amin'ny sehatra misy azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Loko maro sy bateria lehibe kokoa ho an'ny Apple Watch Series 7
Navoaka ho an'ny mpamorona ny MacOS 11.5, watchOS 7.6, ary ny tvOS 14.7 beta